Dhageeyso,,Maamulka Degmada Beydhabo oo xariga kajarey dhismooyin ganacsi oo cusub oo laga hiragliyey magaalada Beydhabo. – Radio Baidoa
Dhageeyso,,Maamulka Degmada Beydhabo oo xariga kajarey dhismooyin ganacsi oo cusub oo laga hiragliyey magaalada Beydhabo.
Magaalada beydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa laga hirgaliyey dhismooyin ganacsi oo ay dhistey maamulka dowlada hoose ee degmada beydhabo.
Ilaa iyo 20 dukaan ayaa maanta xariga laga jarey magaalada beydhabo waxaana looga tala galey in dhaqaalaha degmada kor looga soo qaado.
Munaasbada xariga lagaga jarayey dhismooyinkaan ayaa waxaa goob jog ka ahaa maamulka degmada beydhabo.wasiirka wasaarada maaliyada koonfur galbeed .saraakiil ciidan .wasiirka wasaarada qorsheynta iyo maalgashiga koonfur falbeed soomaaliya mudane axmed madoowe nuunow.
ugu horeyn waxaa munaasbada xarag jarka ka hadley gudoomiyaha degmada beydhabo ahna duqa magaalada xassan macalin axmed [biikoole] waxa uuna sheegey in dukaamadaan lagu dhisey canshuur ay bixiyeen shacabka .sidookale wax uu sheegey in mashruucaan kaga baxdey 20.000 oo doolar .hadana maamulka dowlada hoose ay uqorsheysantahay suuqyo kale oo lagu hirgalindoono magaalada beydhabo.
Dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaarada maaliyada mudane axmed maxamed xuseen iyo wasiirka wasaarada qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed madoowe nuunow waxayna siwadjir ah ay uboqaadiyeen dadaalada uu wado maamullka degmada waxayna shacbka magaalada ugu baaqeen inay dowladooda kula shaqeeyaan dhinaca dhaqaalaha canshuurtana ay bixiyaan si loo hormariyo wax waliba oo nlsha aas aasiga u ah.
Ma, ahan markii ugu horeysey mashruuc noocaan oo kale ah uu fuliyo maamulka degmada beydhabo .waxa uu dhawaan suuq cusub ka hirgaliyey magaalada beydhabo . iyadoona maanta uu xariga kajarey xarumo ganacsi oo gaaraya ilaa 20 dukaan .
Gudoomiyaha degmada Wanlaweyn oo shaqo joojin lagu sameeyay